Du’a | Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu’uura Hawaasummaa Oromiyaa
“Du’a”jechuun namni lubbuun jiraachaa ture tokko mallattoowwan lubbuun jiraachuu isaa argisiisan guutummaan guutuutti akka hin deebine ta’anii yoo badanii fi lammata lubbuun jiraachuu kan hin dandeenye ta’uun yoo mirkanaa’eedha.
Iddoo Itti Galmeessi Du’aa Adeemsifamu
Iddoon galmeessa du’aa waajjira bulchiinsa gandaa isaa teessoon jireenyaa idilee nama du’e kanaa keessatti argamutti ta’a.
Eenyummaan ykn teessoon jireenya idilee nama du’ee kan hin beekamne yoo ta’ef iddoon galmeessaa bulchiinsa gandaa namni kun keessatti du’e argametti ta’a.
Daangaa Yeroo Galmeessa Du’aa
Duuti raawwate tokko guyyoota 30 keessatti galmaa’uu qaba.
Duuti raawwate tokko guyyoota 31-365’f keessatti kan galmaa’e yoo ta’e “kan ture galmaa’e” jedhama
Duuti raawwate tokko waggaa tokkoon booda kan galmaa’e yoo ta’e “kan daangaan yeroo galmeessaa irra darbee irrattin galmaa’a”.
Du’aa galmeessisuuf qaama dirqamaa qabu
Namni nama du’e waliin jiraachaa ture du’aatii nama sanaa galmeessisuuf dirqama qaba.
Namni isa du’e waliin jiraatu kan hin jirre yoo ta’e, fira dhiigaa ykn gaa’elaa isaanis kan hin jirre yoo ta’e, ollaan dhiyeenyatti argamu ykn du’aatii nama sanaa beekuu kamiyyuu galmeessisuu qabu.
Balaa tasaatin ykn sababa hin beekamneen namni eenyummaan isaa adda bahee hin beekamne du’ee yoo argame, waajjirri poolisii gabaasni isa gahee guyyaa 3 keessatti galmeessisuu qaba.
Miseensa raayyaa ittisa biyyaa dirqama irratti du’eef ajajaan kutaa, Ministeerri Ittisaa biyyaa qondaala galmee Kabajaa ta’ee akka tajaajiluu itti gaafatamaa ramadametti du’icha beeksisuun galmeessisuuf dirqama qaba.
Duuti kan muudate manneen barnootaa bultii ykn iddoo waliin jireenyaa biroo keesatti yoo ta’e, itti gaafatamaan dhaabbatichaa du’ichaa galmeessisuu qaba.
Duuti kan muudate mana sirreessaa keessatti yoo muudate ykn murtiin du’aa yoo raawwatame, itti gaafatammaan mana sirreessaa du’ichaa galmeessisuu qaba.
Duuti kan mudate dhaabbataa fayyaa keessatti ykn qorannoodhaaf gara dhaabbata fayyaatti kan ergame yoo ta’e, dhaabbatichi maqaa, koorniyaa, iddoo dhalootaa, guyyaafi iddoo itti du’e, sababa du’aa fi kkf unkaa beeksisa du’aa irratti guutuun qaama du’icha galmeessisuuf dirqama qabuuf kennuu qaba.
Duuti kan muudate Dhaabbataa fayyaa alaa yoo ta’e,caasaan fayyaa bulchiinsa sadarkaa gadiitti argamu ykn ogeessi fayyaa odeeffannoowwan guutamuu qaban uunkaa beeksisaa irratti guutuun battalumatti waajjira galmeessa iddoo du’icha muudateetti beeksisu qaba.
Faayidaa Du’aa galmeessuu
Du’aa nama sanaaf Firootan nama du’eef ragaa seera qabeessa ta’uuf
Gaaffii dhaaltummaa dhiyyeesuu
Gaaffii inshuuraansii dhiyyeesuuf
Deeggarsa maatii argachuuf
Nama gaa’ela waliin qabaniif heeyyamaa gaa’ela biraa akka godhatuu argamsiisuuf
Ragaawwan Deggersaa yeroo galmeessa du’a guutamuu qaban
4.4.1 Ragaawwan Deggersaa
Waraqaa eenyummaa jiraataa nama du’ee / biyyoolessaa /paaspoortii/ vizaa/ baqataa ta’uu kan ibsu/heyyama jiraata yoo qabaata dhiyyaachu qaba.
Galmeessistoonni waraqaa eenyummaa yeroon irraa hin darbinee qabatani dhiyaachuu qabu
Du’icha kan galmeessisu poolisii yoo ta’eef eenyummaa isaa kan ibsu waraqaa eenyummaa ykn ragaa dhiyeessuu qaba.
Du’ichi kan galmaa’u sababa baduu namaatiin yoo ta’e waraabbiin murtii mana murtii baduu nama sanaa ibsu dhiyaachuu qaba.
Du’aa yeroon galmeessa irraa darbee galmeessuudhaaf ragaa barreeffama duuti muudatu isaa ibsu dhiyaachuu qaba.
Duti kan muudate lammii biyyaa alaa irratti yoo ta’e, waraqaa beeksisaa dhaabbata fayyaa irraa kenname ykn ragaan dhiyaachuu qaba
Home » Tajaajila